Vaovao - fampidirana modely ho an'ny takelaka aluminium
Rehefa mividy veneer aluminium isika dia matetika no mahita fa 1100 ny takelaka aluminium no ampiasaina ho toy ny akora. Ka inona marina no asehon'ireo maodelin'ny takelaka aluminium ireo?
Rehefa avy nandamina dia hita fa ny takelaka aluminium ankehitriny dia azo zaraina ho sokajy 9, izany hoe, andiany 9. Ity manaraka ity dia fampidirana tsikelikely:
1XXX andian-dahatsoratra dia aluminium madio, ny atiny aliminioma dia tsy latsaky ny 99.00%
Ny andian-tsarimihetsika 2XXX dia aloi aluminium miaraka amin'ny varahina ho singa mampifangaro lehibe indrindra
Ny andian-tsarimihetsika 3XXX dia aloi aluminium miaraka amin'ny manganese ho singa manaparitaka lehibe
Ny andian-tsarimihetsika 4XXX dia aloi aluminium miaraka amin'ny silicon ho toy ny singa mampifangaro lehibe indrindra
Ny andian-tsarimihetsika 5XXX dia aloi aluminium miaraka amin'ny maneziôma no singa voalohany mampifangaro azy
Ny andiany 6XXX dia alimo aluminium magnesium-silikôla miaraka amin'ny maneziôma ho toy ny singa manaparitaka lehibe sy ny dingana Mg2Si ho dingana manatanjaka
Andian-tsarimihetsika 7XXX dia aloi aluminium miaraka amin'ny zinc ho singa mampangotraka lehibe
Ny andian-tsarimihetsika 8XXX dia alika aluminium miaraka amina singa hafa ho toy ny singa mampifangaro azy indrindra
9XXX andiana dia vondrona firaka hafa
1. Solontenan'ny andiany 1000 1050 1060 1070 1100
Ny takelaka vita amin'ny alimo 1000 dia antsoina koa hoe takelaka aluminium madio. Anisan'ireo andiany rehetra, ny andiany 1000 dia an'ny andiany misy atiny aliminioma betsaka indrindra, ary ny fahadiovana dia mety hahatratra mihoatra ny 99,00%. Satria tsy misy singa ara-teknika hafa dia tsotra ny fizotry ny famokarana ary mora ihany ny vidiny. Io no andiany be mpampiasa indrindra amin'ny indostrialy mahazatra. Ny andiany 1050 sy 1060 dia miparitaka eny an-tsena amin'ny ankapobeny. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma 1000 dia mamaritra ny atiny alimina farafahakeliny amin'ity andiany ity araka ny tarehimarika arabo roa farany, toy ny andiany 1050, araka ny fitsipiky ny fanamarihana marika iraisam-pirenena, ny atiny alimina dia tsy maintsy hahatratra 99,5% na mihoatra mba ho vokatra mahay.
2. solontenan'ny andiany 2000 2A16 2A06
Ny takelaka vita amin'ny alimina 2000 dia miavaka amin'ny hamafin'ny hafanana, miaraka amin'ny votoatin'ny varahina avo indrindra, manodidina ny 3% ka hatramin'ny 5%. 2000 takelaka aluminium alimina dia fitaovana aliminiam-piaramanidina, izay matetika tsy ampiasaina amin'ny indostrialy mahazatra.
Telo. Solontena 3000 series 3003 3004 3A21
Ny takelaka aliminioma 3000 series dia azo antsoina koa hoe takelaka aluminium manohitra harafesina. Ny teknolojia famokarana takelaka alimo 3000 ao amin'ny fireneko dia tena tsara tokoa. Ny takelaka vita amin'ny alimo 3000 dia vita amin'ny manganese ho singa lehibe indrindra, ary ny atiny dia eo anelanelan'ny 1% sy 1,5%. Izy io dia karazana aliminioma misy fiasa tsara hanohitra ny harafesina. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny tontolo mando toa ny aircon, vata fampangatsiahana, ary undercars. Ambony noho ny andiany 1000 ny vidiny, ary andiany firaka ampiasaina matetika ihany koa io.
Efatra. 4000 andiany maneho ny 4A01
Ny andiany 4000 dia andiany misy atiny silika avo kokoa. Matetika ny atin'ny silikone dia eo anelanelan'ny 4,5% sy 6%. Izy io dia an'ny fitaovana fananganana, faritra mekanika, fitaovana fanoratana ary fitaovana fanamafisam-peo.
Dimy. Solontenan'ny andiany 5000 5052 5005 5083 5A05
Ny takelaka vita amin'ny aliminioma 5000 dia an'ny andiana alimina alimika ampiasaina matetika, ny singa lehibe dia maneziôma, ary ny atin'ny magnesium dia eo anelanelan'ny 3% sy 5%, noho izany dia antsoina koa hoe firaka aliminioma-magnesium. Any amin'ny fireneko, ny takelaka vita amin'ny aliminioma 5000 andiany dia iray amin'ireo andiana takelaka alimina matotra kokoa. Ny tena mampiavaka azy dia ny hakitroky ambany, ny tanjaka am-pahefana avo ary ny fahalefahana tsara. Amin'ny faritra iray ihany, ny lanjan'ny firaka aliminioma-magnesium dia ambany kokoa noho ny andiany hafa, noho izany dia matetika ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiaramanidina. Mazava ho azy fa ampiasaina amin'ny indostrialy mahazatra ihany koa izy io.
Enina. 6000 andiany maneho ny 6061
Ny andiany 6000 dia misy singa roa maneziôma sy silikika, noho izany dia manana tombony amin'ny andiany 4000 sy andiany 5000 izy io, ary mahazaka fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny oksidasiana. Ny 6061 dia mora palitao ary mora karakaraina, ka matetika no ampiasaina hanamboarana tonon-taolana, lohan'andriamby, ary faritra misy valizy.
Fito. 7000 andiany maneho 7075
Ny andiany 7000 dia misy zinc matetika ary koa firaka aerospace. Izy io dia firaka aliminioma-magnesia-zinc-varahina miaraka amin'ny fanoherana tsara. Ny takelaka aliminioma 7075 dia maivamaivana, tsy ho simba aorian'ny fikarakarana, manana hamafin'ny tanjaka sy tanjaka be, noho izany dia matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanamboarana ny rafitry ny fiaramanidina sy ny ho avy.
8. Andiany 8000 maneho 8011
Ny andiany 8000 dia an'ny andiany hafa ary tsy dia ampiasaina matetika. Ny andiany 8011 dia takelaka aluminium izay ny asany lehibe dia ny manamboatra kapila tavoahangy. Izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny radiatera, ary ny ankamaroan'izy ireo dia ampiasaina amin'ny foil aluminium.
Ny andiany sivy.9000 dia andiam-pialan-tsasatra iray, ampiasaina hiatrehana ny fisehoan'ny takelaka firaka aliminioma miaraka amin'ireo singa hafa.